5 Calaamadood oo Aad Ka Weynayso Macluumaadka MySQL | Martech Zone
5 Calaamadood oo ah inaad ka korrayso Macluumaadkaaga MySQL
Muuqaalka maareynta xogta waa mid adag oo dhaqso isu beddelaya. Ma jiraan wax xoojinaya isbeddelkan in ka badan soo ifbaxa 'super apps' - ama codsiyada ka shaqeeya malaayiin is-dhexgal isticmaale ilbiriqsi kasta. Xaqiijinta Xogta Weyn iyo daruuraha, oo waxaa caddaatay in ganacsatada e-commerce u baahan yihiin jiil cusub oo xog-ururin ah oo waxqabad fiican sameyn kara isla markaana cabbiri kara.
Ganacsi kasta oo khadka toosan ah oo aan lahayn xog-ururin la cusbooneysiiyey waxay u badan tahay inuu socdo MySQL, xog ururin si dirqi ah loo cusbooneysiiyey tan iyo markii la aasaasay 1995. Ka dib oo dhan, ereyga "NewSQL" kama uusan mid noqon qayb ka mid ah qaamuusyada dijitaalka ah illaa iyo Matt Aslett, oo ah falanqeeye ka tirsan Kooxda 451 , ayaa soo alifay 2011.
In kasta oo MySQL hubaal tahay inay awood u leedahay inay maamusho heshiis wanaagsan oo taraafikada ah, maaddaama meheraddu ay sii kordheyso, haddana xog-ururinteedu waxay u badan tahay inay gaarto awoodda ugu sarreysa iyo boggeeda internet-ka inuu shaqada si habsami leh u joojin doono. Haddii aadan hubin in ururkaagu diyaar u yahay iyo in kale keydka xogta NewSQL, halkan waxaa ku yaal shan calaamadood oo laga yaabo inaad ka sii kordheyso MySQL:
Dhibaataynta maaraynta ayaa akhrisata, qortaa iyo cusbooneysiin - MySQL wuxuu leeyahay xadidaad dhanka awooda ah. Maaddaama macaamiil aad u tiro badani ay dhammaystiraan macaamillada websaydhkaaga, waa uun wakhti uun ka hor intaanay keydkaaga keydku dhicin. Intaa waxaa dheer, markii culeyskaagu kordho, oo ay kugu adkaato inaad wax ka qabato akhrinta iyo qorista dheeriga ah, waxaad u baahan kartaa xog-ururin kale. MySQL waxay qiyaasi kartaa iyadoo la adeegsanayo “akhrinta-addoomada”, laakiin codsiyada waa inay ogaadaan in akhrintu aysan la mid ahayn qoritaanka-master-ka. Tusaale ahaan, marka macaamilku cusbooneysiiyo badeecadaha gawaarida elektaroonigga ah, waa in laga akhriyaa qoraaga. Haddii kale, waxaad halis u tahay tirada la heli karo ee loo ballan-qaaday inay khaldan tahay. Hadday taasi dhacdo, waxaad kuheli doontaa cidhiidhi meesha ugu xun ee suurtogalka ah: khadkaaga iibsiga e-commerce. Caqabad ku ah goobta wax lagu iibsado waxay sababi kartaa gawaarida la dayacay, ama ka sii xun, waxaad iibin doontaa alaabada aadan haysan, waana inaad la macaamishaa macaamiisha xanaaqsan, iyo suurtogalnimada soo-gaadhista warbaahinta bulshada ee xun.
gaabiya Analytics iyo warbixin - Macluumaadka MySQL ma bixiyaan waqti-dhab ah Analytics awoodaha, mana bixiyaan taageerada dhismooyinka kale ee SQL. Si wax looga qabto dhibaatadan, labadaba Multi-Version Concurrency Control (MVCC) iyo Massively Parallel Processing (MPP) ayaa looga baahan yahay ka shaqeynta culeysyo fara badan maxaa yeelay waxay u oggolaanayaan qorista iyo Analytics inay dhacdo faragelin la'aan, oo isticmaal noodhadh badan iyo qaybo badan xuddunta si aad u sameyso su'aalaha falanqaynta si dhakhso leh.
Waqti dhimis joogto ah - Macluumaadka MySQL waxaa lagu dhisay hal dhibic oo guuldarro ah, taasoo la micno ah haddii wax kasta oo ka mid ah - sida wadista, Motherboardka, ama xusuusta - ay guul darreystaan, dhammaan keydka macluumaadka ayaa fashilmaya Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto waqti dhimis soo noqnoqda, taas oo sababi karta luminta dakhliga. Waad isticmaali kartaa kala-goysyada iyo addoommada, laakiin kuwani waa kuwo jilicsan oo ma xamili karo xaddi badan oo taraafiko ah. Xog ururin ballaaran ayaa haysa nuqullo badan oo xogtaada ah, waxay siisaa dulqaad dhisme qalad ah waxayna ilaalisaa hawlgallada inkasta iyo / ama cilladaha diskiga.
Qiimaha horumariyaha sare - Soosaarayaasha la shaqeynaya keydka macluumaadka MySQL waa inay inta badan waqtigooda ku lumiyaan wax ka qabashada arrimaha tuubooyinka ama wax ka qabashada cilladaha keydka. Soo-saareyaasha la shaqeeya xog-ururin ballaadhan ayaa u madax-bannaan inay taas beddelkeeda ka shaqeeyaan soo-saarista astaamaha iyo in badeecaddu si dhakhso leh suuqa u gasho. Natiija ahaan, waqtiga suuq-geynta ayaa hoos u dhacaya shirkadaha e-ganacsiga waxay awood u leeyihiin inay dakhli dhakhso leh ku helaan.
Adeegyo badan - Adeeg bixiyayaashu waxay ku sii kordhayaan RAM muddo dheer, ama badanaa maalintii oo dhan, waa tilmaame muhiim ah oo MySQL aysan la socon karin koritaanka ganacsiga. Ku darista qalabka waa xallinta degdegga ah, laakiin sidoo kale waa mid aad qaali u ah oo aan ahayn xalka muddada-dheer. Haddii ururradu adeegsadeen qaab ballaadhin, xogta waa lagu soo koobi karaa dhammaan noodhadhka, iyo sida macaamilku u kordhayo cabbirka iyo xaddiga, culeyska shaqada ayaa loo wareejinayaa noodhadh kale oo ku dhex jira keydka xogta.
Way cadahay, MySQL waxay leedahay xaddidaadkeeda, iyo waqtiga la siiyay iyo kobaca taraafikada, xog kastoo MySQL waxay ku xiran tahay inay la kulmaan waxqabadka iyo arrimaha latency. Iyo websaydhada elektaroonigga ah e-commerce, cilladahaas ayaa runtii hubaal u tarjumi doona dakhli la seegay.
Si kastaba ha noqotee, maahan inay layaab badan noqoto markaa tiknoolajiyad la dhisay labaatan sano ka hor waxay la halgameysaa inay ku sii socoto adduunka casriga ah ee xawaaraha ku socda. Ka fikir waxa ku saabsan: sidee barnaamijyaashu ugu soo bixi karaan 1995 saadaalin intee le'eg ayuu internetku dhab ahaan noqonayaa?
Tags: ciriiriwaxqabadka keydka macluumaadkakeydka macluumaadka mustaqbalkaMySQLdhismaha mysqlxidhiidhada mysqlmysql ayaa aqrinayaka warbixinta mysqlcusbooneysiinta mysqlmysql ayaa qoray
Mike waa Madaxweynaha & Madaxa Fulinta ee Clustrix. Mike wuxuu in ka badan 25 sano oo iib iyo khibrad hoggaamineed fulineed ku leeyahay codsiyada falanqaynta ee baaxadda leh, xisaabinta shabakadda, kaabayaasha kaydinta, amniga, iyo tafaariiqda.
3 Xeerarka cilmu-nafsiga ee iibka iyo suuqgeynta